PanzerGlass, mpiaro ny efijery ho an'ny findainao izay manohitra ny famonoana | Androidsis
Androany saika ny olona rehetra dia manana smartphone. Ary azoko antoka fa farafaharatsiny farafaharatsiny misy ny namanao na olom-pantatrao misy finday avo lenta finday miaraka amin'ny efijery vaky. Isaky ny tonga any an-tsena ny vahaolana vaovao hiatrehana io olana io, ary ny iray amin'ireo tsara indrindra, raha tsy ny tsara indrindra, dia Panzer Glass.
Eny, tsy tena vaovao ny orinasa satria efa an-tsena nandritra ny taona vitsivitsy, fa anio kosa izahay mitondra anao horonantsary ahafahanao mahita ny fomba fanoheran'ny mpiaro ny efijery PanzerGlass amin'ny kapoka ataon'ny marotoa, fanapahana sy izay rehetra manelingelina nefa tsy mikorontana. Aza adino izany!
Ity no tsiambaratelon'ny fanoherana avo lenta ny vokatra PanzerGlass
Saingy ahoana no itanan'ireo mpiaro ny efijery amin'ity mpanamboatra ity? Ny tsiambaratelo dia mitoetra ao amin'ny takelaka fitaratra japoney izay henjana amin'ny hafanana mihoatra ny 500 degre centigrade mandritra ny 5 ora. Raha vantany vao mandeha io fizotran-javatra io dia mampiasa diamondra izy ireo hanapahana sosona manify tena izy izay hiafara amin'ny famokarana vokatra tena mahatohitra izay misy sosona oleophobic koa mba tsy misy dian-tànana eo amin'ny efijery aorian'ny fampiasana azy.
Araka ny efa hitanao tamin'ny horonantsary, mpiaro ny efijery PanzerGlass tena mahatohitra izy ireo fa tsy mety simba. Soa ihany fa nieritreritra ny zava-drehetra ny mpanamboatra. Araka ny efa hitanao tao amin'ny horonantsary, raha vaky ilay mpiaro, dia tsy hikorisa an-jatony kely sy maranitra izy io, fa hivaky takelaka vitsivitsy, hisorohana ny fahasimban'ny telefaona noho ilay sarimihetsika manohitra ny fahavakisan-tanana izay hiaro ny findainao findainao na ny takelaka fisorohana ny faharatsiana lehibe kokoa.
Tandremo fa tsy mora ny vokatra misy ireto toetra ireto: Ireo mpiaro ny efijery PanzerGlass dia manodidina ny 20-30 euro arakaraka ny maodely saingy, raha jerena ny fanoherana avoakany, heveriko fa mendrika ny famoahana ara-bola.
Ao amin'ny tranokalan'ny mpanamboatra dia azonao atao ny mahita ny vokatra misy azy manontolo, fa raha te hividy iray ianao, ny safidy tsara indrindra dia ny Amazon izay misy ny isan'ireo mpiaro ny efijery PanzerGlass.
Ahoana ny hevitrao amin'ireo mpiaro ny efijery?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » IFA » PanzerGlass, mpiaro ny efijery ho an'ny findainao izay manohitra ny famonoana
Samsung Galaxy S8 dia ho tonga amin'ny habe roa, samy misy ny "Edge" miolakolaka.
Samsung dia nanambara ny telefaona Flip Galaxy 2